Fehin’ny Bilaogy ao Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Fehin'ny Bilaogy ao Azia Atsimo
Voadika ny 05 Novambra 2018 16:23 GMT
- Miresaka momba ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana anatin'ny tontolon'i Bangladesh i Rifat ao amin'ny ‘Close your eyes and try to see’ (Akimpio ny masonao ary miezaha mijery).
- Mahatsiaro ny tantaran'i Josefa/Yusuf/Yosef, mpaminany anaty foto-pinoana telo natao hiaro ny toetra tsara mamela heloka, i Shappir ao amin'ny ‘Bring your own Shisha’ (Ento ny Shisha anao manokana).
- Omen'i Razib ao amin'ny ‘Me, myself and Bangladesh’ (Izaho sy ny tenako ary i Bangladesh) rohy isika, mankany aminà tatitra manambara fa mampiasa ny khadi anatin'ny famoronana ireo sari sy fitafy entina manambady ireo Mpamorona akanjo ao Bangladesh. Sady vetivety izy ireo dia malaza ao India.
- Mitanisa ireo Lalàna Volamena anatin'ny foto-pinoana samihafa i Sadiq anatin'ny bilaoginy “Inspirations and Creative Thoughts” (Aingam-panahy sy Eritreritra Mamorona).
- Milaza (pejy voafafa) i Salam ao amin'ny ‘Salam Dhaka’ fa tsy manao soa ho an'ny vahoaka mahantra ny governemanta Bangladeshi mitondra amin'izao fotoana.
- Mitantara ny fomba nitantananà Amerikanina iray ny fiainany tao India i Selva ao amin'ny ‘The Scientific Indian’ (Ilay Indiana Siantifika).
- Manoratra bilaogy ny sakafo antoandrony tanatinà trano fisakafoana Italiana i Madman (Ilay Adala). Matsiro!
- Mitanisa vatosoa sarobidy roa anatin'ny ‘fivakisana niomerika’ sy ny ‘Solosaina sy ny Fanabeazana’ i Rajesh Jain ao amin'ny ‘Emergic’ (Misandratra).
- Mihevitra ny vondrompiarahamonina Parsi ao India ho faka tahaka ho an'ireo Indiana ambiny rehetra i Shaksi ao amin'ny ‘To each its own’ (Samy manana ny azy).
- Leo ny antitra (pejy voafafa) tanteraka i Ahmed.
- Mitatitra (pejy voafafa) ny Tambajotra Iraisam-pirenena Firahalahian'i Nepal fa horaketin'ireo hery fiarovana sisintany avy amin'ny firenena roa tonta ao India sy Nepal ny mombamomba sy ny fihetsiky ny Indiana sy Nepaley rehetra mandia ny sisintany manasaraka azy ireo manomboka ny 01 Novambra.
- Manamarika (pejy voafafa) i Dinesh ao amin'ny ‘United We Blog’ (Isika Miaraka no Mibilaogy) fa te hametraka demôkrasia ireo antoko politika Nepaley, ny Mpanjaka kosa anefa miresaka fifidianana. Miteraka adihevitra mahaliana izany.
- Mitatitra (rohy maty) i Laetitia-Marie ao amin'ny ‘Karma Sonam Gurung’ fa niampanga ny Maoista sy ireo hery fiarovana ho tsy nahavita niaro ireo zon'ny ankizy araka ny lalàna ao an-toerana sy iraisam-pirenena ny kaomisiona mpiaro ny zon'olombelona ao Nepal tanatinà tatitra vao haingana.
- Manoratra bilaogy avy ao New York i Binita Shrestha ary mitondra (pejy voafafa) ny zava-drehetra mikasika ny tatitra momba ny fitsaràna ho antsika.
- Manome rohy mankany (pejy voafafa) aminà fanomezam-bola mampiasa karatra fandoavam-bola anaty aterineto ho fanampiana ireo niharan'ny horohorontany tao Pakistana i Mudassir ao amin'ny ‘Pakistani perspective’ (Fomba Fijery Pakistaney).
- Mamoaka zavamisy vitsivitsy mahavaky fo momba ilay horohorontany farany teo i ‘Glasshouse’. Manome fomba fijery mitsikera ny fitantanana Pakistaney miatrika io loza io ihany koa izy.
- Manome rohy (rpejy voafafa) mankany amin'ny valintenin'ireo bilaogera Pakistaney vitsivitsy manoloana ny horohorontany i Shirazi ao amin'ny ‘Light Within’ (Hazavana Anaty). Mamoaka fehin'ireo valintenin'ny media manoloana ilay horohorontany kosa i Maria.
- Manana vaovao sy rohy marobe momba ilay horohorontany i Metroblogging Lahore.
- Mandray andraikitra manokana hanangonam-bola ho an'ireo niharam-boina ireo Bilaogera Pakistaney tahaka an'i Sepoy ao amin'ny ‘Chapati Mystery’ (Zavamiafin'ny Chapati).
- Mametra-panontaniana (pejy voafafa) i Marisa Wikramanayake raha misy tokoa ny zavatra tahaka ny ady marina?
- Amin'ny alàlan'ny ‘Lanka Citizen’, mampitandrina (rohy maty) ireo mpanao politika amin'ny andraikiny ny feon'ny vahoaka tsotra.
- Manoratra (pejy voafafa) momba ny fitsidihany toerana mahafinaritra maro tao Sri Lanka, miaraka aminà sary maro, i Shandy, Britanika iray mpila ravinahitra.
- Mamoaka sary kanto vitsivitsy avy ao Sri Lanka i Kate Baumgartner.